Pfandkredit के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki Pfandkredit
1 बंधक ऋण के हो?
2 झूठको लाभ
2.1 तपाईं कसरी मोडा ऋण पाउनुहुन्छ?
2.2 एक लेनको मूल्य
2.3 कसको लागि यो Pfandlei मा जाने को सिफारिश छ?
3 सम्बन्धित लिङ्कहरू:
बंधक ऋण के हो?
ALS Pfandkredit एक सानो ऋण हो, जुन तपाईं सुरक्षा को लागि Pfandhäusern बाट प्राप्त गर्नुहुन्छ। एक ऋण को ऋण प्राप्त गर्न को लागि, तपाईं एक pawnbroker संग एक मूल्यवान आइटम जमा गर्नु पर्छ। को राशि ऋण रकम pawnbroker जम्मा को ऋण मूल्य को आधार मा गणना गर्दछ। अधिकतर अवस्थाहरूमा, घडीहरू, कीमती पत्थरहरू, हीराहरू, कीमती धातुहरू, आभूषणहरू, स्मार्टफोनहरू, ट्याब्लेट पीसीहरू साथै मनोरञ्जन इलेक्ट्रोनिक्सको श्रेणीबाट उच्च गुणस्तरका उपकरणहरू उधारिएका छन्। तपाईंले स्वीकृत रकम तिर्नु भएपछि, मोनब्रोकरले तपाईंलाई तपाइँको मूल्य फिर्ता दिनेछ। स्वीकृत राशि pawnshop, ब्याज र ऋण योग को फीस देखि बनाएको छ।
जम्माकर्ताहरूको लागि प्रावधान कानूनकारहरूको अनिवार्य छ। यही कारणले गर्दा तपाईं एक प्यानको उपयोग गर्दा उपभोक्ताको रूपमा सुरक्षित पक्षमा हुनुहुन्छ। एक संपार्श्विक को अन्य फायदे:
जम्माको उच्च सुरक्षा (भण्डारण अवधिको अवधिमा बीमा)
छिटो, असुद्ध भुक्तानी को पैसा
अनुभवी विशेषज्ञहरु द्वारा सटीक र छिटो मूल्यांकन
कुनै क्रेडिट चेक
Schufa प्रविष्टि छैन
तपाईं कसरी मोडा ऋण पाउनुहुन्छ?
एक Pfandkredit एक असामान्य प्रकृया द्वारा विशेषता हो। तपाईं को भुक्तानी गर्न को लागी या pawnbroker संग वेतन को एक प्रमाण को कुनै प्रमाण प्रदान गर्न छैन। Pawnshop को साथ एक अनुबंध समाप्त गर्न को लागि, यो तपाईंको आईडी कार्ड सबमिट गर्न को लागि पर्याप्त छ। सामान्यतया, तीन महिनाको अवधिको लागि एक ऋण ऋण अनुबंध समाप्ति गरिन्छ। यदि तपाईं शब्दको समयमा बिरामी हुनुभयो भने, pawnshop ले तपाईंलाई चार हप्ताको पर्खाइ अवधि दिनेछ।
Pfandkredit प्राप्त गर्न, एक पहिचान कागजात (पासपोर्ट वा आइडी कार्ड) र मूल्य जुन तपाईले उधारो लिन चाहानुहुन्छ, pawnbroker। न्यायाधीशले जम्मा मूल्याङ्कन गर्दछ र वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दछ। एक नियमको रूपमा, तपाईंको डिपोको पुन: प्राप्ति मूल्यको 50 प्रतिशत तपाईंको ऋणको रूपमा भुक्तान गरिनेछ। यदि तपाइँ सर्तहरूसँग सहमत हुनुहुन्छ भने, एक जम्मा सम्झौता जारी गरिनेछ र हस्ताक्षर गरिनेछ। सहमतिको म्याद समाप्ति पछि, तपाइँ ट्रिगर शुल्क को तपाईंको भुक्तान फिर्ता गरिने छ।
एक लेनको मूल्य
पहिले नै उल्लेख गरिएको रूपमा, तपाईंलाई पुनर्विक्रय मूल्यको pawnbroker 50 प्रतिशत द्वारा क्रेडिट रकमको रूपमा भुक्तानी गरिनेछ। लामो समयसम्म परिपक्वता र उच्च ऋणको रकम, अधिक महंगी एक लेन छ। औसत मा, ऋण को लागत एक महिना र दुई महिना को बीचमा प्रत्येक महिना तपाईं को भुक्तानी को बीच हो। यसबाहेक, तपाईंलाई आफ्नो मूल्यवान वस्तुहरूको बीमा र भण्डारणको लागि चार्ज गरिनेछ र वैधानिक अनुमान शुल्क।
निम्न उदाहरणले देखाउँछ: 300 यूरोको क्रेडिट योग माथि तपाईले 1 प्रतिशत ब्याज + प्रति दिन 6,50 यूरो को एक फ्लैट दर तिर्न पर्छ। प्रत्येक महिना, तपाईले तपाइँको प्यान 9,50 यूरो तिर्नुहुनेछ। तपाईं केवल समय को लागी छ कि लिई घर मा वस्तु वास्तव मा हो। यस समयमा चाँडै छोटो हुन सक्छ। एक रनटाइम एक्स्टेन्सनको साथ तपाईंले प्रति दिन थप लागत खर्च गर्नुहुनेछ। यदि तपाईं 300 यूरोको क्रेडिट सीमा पार गर्नुहुन्छ भने, चासो अब बाध्यकारी छैन, तर तपाईले कुराकानी गर्नु पर्छ। यसैले pawnshop बाट ऋण महँगो हुन सक्छ।
कसको लागि यो Pfandlei मा जाने को सिफारिश छ?
Pawnbroker को लागि पाठ्यक्रम तपाईंको लागि सार्थक छ, खासकर यदि तपाईं आफ्नो मूल्यवान सम्पत्ति छिट्टै छुटाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि, यदि फिर्ता खरिद गर्न पैसा हराइरहेको छ भने, तपाईंले रनटाइम विस्तार गर्नुपर्छ। यो अतिरिक्त लागतहरु मा परिणाम।
यदि तपाईं एक स्वतंत्र व्यक्तिको रूपमा थप नगदको आवश्यकता छ भने pawnshop मा हिंड तपाईंको लागि एक विकल्प हुन सक्छ, ताकि तपाईं छिटो लगानी गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को लेखशीर्षक दावी